casino filokana taona any washington fanjakana
casino filokana taona any texas
Teo anivon ' ny foko asa izay mety ho fiantraikany ireo ao amin'ny loharano ara-kolontsaina, ny fampianarana, ny fahasalamana, ny trano fonenana, ny fiarovana ny vahoaka sy ny harena voajanahary, araka ny fanambaràna iray nalefa tany amin'ny OTGA filohan'ny Gary George Trano mpandaha-teny Tina Kotek casino filokana sambo ao rotra tora-pasika sc. Ny foko efa tsikelikely voangon'ny 13 hektara nandritra ny enin-taona, ny farany roa entana ao Atsimo Medford ho azony faramparan'ny taon-dasa casino filokana taona any washington fanjakana. Izany fanapahan-kevitra izany dia manapa-kevitra raha ny foko afaka manokatra ny toerana. Ny lalàna no nanohana ara-bola tamin'ny alalan'ny antenimieran-Doholona ny fitantanam-Bola Komity Filohan'ny Sen. Oregon dalàna te-hanana ny fanatanjahan-tena betting safidy eo amin'ny misy fampiharana eo amin'ny toerana amin'ny volana septambra casino filokana taona any texas. Ohatra, ny ngazidja comorian Indiana Foko nanome soso-kevitra faharoa casino, ity iray ity ao Medford. Tena tandindonin-doza ho an'ny foko dia vola ampy amin'ny ambony-tsatòka casino mpividy ny fampiasana ny slot milina.
Eo ambany amin'izao fotoana izao ny fanjakana ny lalàna, afaka mpandoa hetra dia afaka deduct ny vola very ny filokana — maso ny vola izy ireo nandresy tamin'ny lalao — rehefa nahafantatra avy taxable fidiram-bola mainty bera casino misokatra amin'izao fotoana izao. Ny sasany Oregon foko ka mieritreritra ny hanitatra ny lalao asa mainty bera casino misokatra izao. Amin'ny taona 2018, 2 isan-jato ireo mpiloka nanome 50 isan-jato ny Fanahy Tendrombohitra ny vola miditra, araka ny OregonLive.com Ny matetika toerana mpitsidika matetika diniho ny hetra deduction rehefa nahafantatra ny tena izy dia tokony wager tao amin'ny casino.
Amin'ny 2016, lalao mifandray amin'ny fanjakana ny foko trano filokana nanangana ny $163 tapitrisa amin'ny hetra amin'ny vola miditra na ny fizarana ny vola miditra ho an'ny eo an-toerana Oregon governemanta, araka ny 2017 tatitra avy amin'ny Amerikana Lalao Fikambanana mainty bera casino mbola misokatra.